६९ वर्षीय वृद्धले एसईई परिक्षा दिँदै « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
६९ वर्षीय वृद्धले एसईई परिक्षा दिँदै
ओएस नेपाल,काठमाडौँ, ६ चैत । पहिलो पटक सुरु भएको एसईई परीक्षामा स्याङ्जामा ६९ वर्षीय वृद्ध पनि सहभागी भएका छन् । यहाँको कालाभैरव उच्च माविमा अध्ययनरत ६९ वर्षीय दुर्गे कामी सिद्धार्थ माविमा एसईईको परीक्षा दिन पुगे ।
तेरिया मगर नेपालक रुपन्देही जिल्लामे अवस्थित रुद्रपुर गाविस सुनगाभाचोकक वासिन्दा हुन्। उनको पुरा नाम तेरिया
जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी (भिडियो)
महेश बोहरा, गुल्मी बारीपारी घना जंगल, ३ नदीको संगमअनिबिचमा मनै लोभ्याउने मन्दिर । यो दृश्य
कोरोना भ्याक्सिन रसियाबाट निस्किएको समयमा नेपालीको यो कस्तो आपत्ति ?
रुसले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन विकास गरी अक्टोबर महिनामा सर्वसाधारणमा प्रयोगमा ल्याउने जनाइसकेको छ । उसले
काठमाडौँमा भेटिए अंगुर खेती गर्ने गायक ! गीत गाएरै सबैलाई रुवाउँछन्
भनिन्छ हरेक व्यक्तिभित्र केही न केही प्रतिभा हुन्छ । कसैले आफुमा भएको त्यो प्रतिभालाई पहिचान